Sidee loo macneeyey dagaal sokeeye - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
General Director Dan Eliasson
Sidee loo macneeyey dagaal sokeeye
La daabacay onsdag 7 oktober 2009 kl 11.10
Go’aanka maxkamadda sare ee qaxootiga wuxuu ka mid yahey go’aammadii ugu muhiimsanaa ee maxkamaddu gaarto afartii sannadood ee ugu dambeeyey, waana go’aan saameeyn ballaaran ku yeelan doona go’aammada dadyoowga magangelyo doonka, sida uu sheegey Dan Eliasson, agaasimaha guud ee heyadda socdaalka.
Go’aanka maxkamadda ayuu Dan Eliasson ku tilmaamey inuu yahey mid wanaagsan una sahlaya hoowshooda maadaama uu go’aankaasi caddeeynayo sida loo macneeyn lahaa waxa lagu magacaabo dagaalka sokeeye.
- Wixii go’aankaa ka horreeyey waxaa ka jirey jahwareer xaaladda ey Muqdisho ku sugan tahey, iyadoona saddexda maxkamadood ee socdaalka ee Istockholm, Göteborg iyo Malmö ey siyaabo kala duwan go’aan middaa uga gaari jireen.
Inkasta oo heyadda socdaalku wixii Salaasadii ka horreeyey aaney u arag in magaalada Muqdisho uu ka aloosan yahey dagaal sokeeye ayaa haddana wuxuu iminka agaasimaha heyadda socdaalku sheegey in fikirkoodaa ey iska bedeleen, kuna hoowlgeli doonaan fikir ah in dagaal sokooye uu ka aloosan yahey magaalada Muqdisho, taasina macnaheedu tahey in qof walba ee carrigaa ka yimaada uu xaq u leeyahey inuu deggenaansho magangelyo uu ku helo dalkan, sida uu sheegey Dan Eliasson.
- Laga bilaabo maalintii Salaasada waxaan u hogaansannaan doonnaa go’aanka maxkamadda. Waxaan ku bogaadineeynaa in dhammaan dadyoowgii deggenaanshaha loo diidey nala soo xiriiraan. Iyadoona xitaa haddii aaney nala soo xiriirin aan feeylkooda dib ugu noqon doonno.
Wixi ka horreeyey go’aanka maxkamadda sare ee qaxootiga waxey heyadda socdaalku ku hoowlgeli jirtey fikir la xiriira in aan dagaal sokooye lagu macneeyn karin haddii aaney ciidammo dawladeed dagaalka dhankooda kaga jirin, iyo xitaa haddii ey jirto in jabhadda ka soo horjeeddaa ey dhul ey maamulkeeda leedahey uu jiro. Iyo weliba iyada oo qiimeeynta la saarey dhibaatada la soo gudboonaan karta shacbiga.